Acryli ntekwasa faiba glaasi Fabric Manufacturers & Suppliers - China Acryli ntekwasa faiba glaasi Fabric Factory
Acryli Faiba glaasi Cloth na-akpa na E-iko yarn na textured yarn, mgbe ahụ, ntekwasa na acrylic mama. O nwere ike ịbụ ma otu akụkụ ma akụkụ abụọ mkpuchi. Uwe a dị mma maka ihe mkpuchi ọkụ, ákwà mgbochi ịgbado ọkụ, mkpuchi mkpuchi ọkụ, n'ihi oke oke ya, dị ka ire ọkụ ọkụ, nguzogide okpomọkụ dị elu, ike dị elu, mmekọrịta enyi na gburugburu.
Faiba glaasi Cloth N'ihi ụgbọ mmiri Building
Faiba glaasi Cloth N'ihi Boat Building na-kpara na E-iko yarn na textured yarn, mgbe ahụ, ntekwasa na acrylic mama. O nwere ike ịbụ ma otu akụkụ ma akụkụ abụọ mkpuchi. Uwe a dị mma maka ihe mkpuchi ọkụ, ákwà mgbochi ịgbado ọkụ, mkpuchi mkpuchi ọkụ, n'ihi oke oke ya, dị ka ire ọkụ ọkụ, nguzogide okpomọkụ dị elu, ike dị elu, mmekọrịta enyi na gburugburu.
Faiba glaasi Cloth 3m
Faiba glaasi Cloth 3m na-akpa na E-iko yarn na textured yarn, mgbe ahụ, ntekwasa na acrylic mama. O nwere ike ịbụ ma otu akụkụ ma akụkụ abụọ mkpuchi. Uwe a dị mma maka ihe mkpuchi ọkụ, ákwà mgbochi ịgbado ọkụ, mkpuchi mkpuchi ọkụ, n'ihi oke oke ya, dị ka ire ọkụ ọkụ, nguzogide okpomọkụ dị elu, ike dị elu, mmekọrịta enyi na gburugburu.
Ọdụdọ mkpuchi faiba glaasi Cloth
A na-eji akwa yarn na-acha uhie uhie na akwa yarn, ma jiri ya kpuchie ya na acrylic gluu. O nwere ike ịbụ ma otu akụkụ ma akụkụ abụọ mkpuchi. Uwe a dị mma maka ihe mkpuchi ọkụ, ákwà mgbochi ịgbado ọkụ, mkpuchi mkpuchi ọkụ, n'ihi oke oke ya, dị ka ire ọkụ ọkụ, nguzogide okpomọkụ dị elu, ike dị elu, mmekọrịta enyi na gburugburu.
Corrosion eguzogide ọgwụ faiba glaasi Cloth
A na-eji akwa yarn na-acha uhie uhie na akwa yarn, nke a na-etinye na gluu acrylic. O nwere ike ịbụ ma otu akụkụ ma akụkụ abụọ mkpuchi. Uwe a dị mma maka ihe mkpuchi ọkụ, ákwà mgbochi ịgbado ọkụ, mkpuchi mkpuchi ọkụ, n'ihi oke oke ya, dị ka ire ọkụ ọkụ, nguzogide okpomọkụ dị elu, ike dị elu, mmekọrịta enyi na gburugburu.
Uwe faiba glaasi
A na-eji yarn na-acha odo odo na yarn ederede, ma jiri ya na gluu acrylic kpuchie ya. O nwere ike ịbụ ma otu akụkụ ma akụkụ abụọ mkpuchi. Uwe a dị mma maka ihe mkpuchi ọkụ, ákwà mgbochi ịgbado ọkụ, mkpuchi mkpuchi ọkụ, n'ihi oke oke ya, dị ka ire ọkụ ọkụ, nguzogide okpomọkụ dị elu, ike dị elu, mmekọrịta enyi na gburugburu.
Cheap faiba glaasi Cloth
Cheap Faiba glaasi Uwe na-akpa na E-iko yarn na textured yarn, mgbe ahụ, ntekwasa na acrylic mama. O nwere ike ịbụ ma otu akụkụ ma akụkụ abụọ mkpuchi. Uwe a dị mma maka ihe mkpuchi ọkụ, ákwà mgbochi ịgbado ọkụ, mkpuchi mkpuchi ọkụ, n'ihi oke oke ya, dị ka ire ọkụ ọkụ, nguzogide okpomọkụ dị elu, ike dị elu, mmekọrịta enyi na gburugburu.
6mm Oké faiba glaasi Cloth mpempe akwụkwọ
6mm Thick Faiba glaasi Cloth Sheet na-akpa na E-iko yarn na textured yarn, mgbe ahụ, ntekwasa na acrylic mama. O nwere ike ịbụ ma otu akụkụ ma akụkụ abụọ mkpuchi. Uwe a dị mma maka ihe mkpuchi ọkụ, ákwà mgbochi ịgbado ọkụ, mkpuchi mkpuchi ọkụ, n'ihi oke oke ya, dị ka ire ọkụ ọkụ, nguzogide okpomọkụ dị elu, ike dị elu, mmekọrịta enyi na gburugburu.
3mm ọkpụrụkpụ faiba glaasi Cloth
3mm ọkpụrụkpụ faiba glaasi Cloth na-akpa na E-iko yarn na textured yarn, mgbe ahụ, ntekwasa na acrylic mama. O nwere ike ịbụ ma otu akụkụ ma akụkụ abụọ mkpuchi. Uwe a dị mma maka ihe mkpuchi ọkụ, ákwà mgbochi ịgbado ọkụ, mkpuchi mkpuchi ọkụ, n'ihi oke oke ya, dị ka ire ọkụ ọkụ, nguzogide okpomọkụ dị elu, ike dị elu, mmekọrịta enyi na gburugburu.
Uwe faiba glaasi, Acryli faiba glaasi Cloth, Acryli ntekwasa faiba glaasi, Pu ntekwasa faiba glaasi Fabric Cloth, Aluminized faiba glaasi Cloth, Acryli ntekwasa faiba glaasi Fabric,